Drafitra lehibe ho an'ny minisitry ny fizahantany any Jamaika any Angletera sy Moyen Orient
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Drafitra lehibe ho an'ny minisitry ny fizahantany any Jamaika any Angletera sy Moyen Orient
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Mpitarika fizahan-tany maneran-tany manana fandaharam-potoanan'i Jamaika navela ho any Angletera sy Afovoany Atsinanana. Manana drafitra lehibe izy, fandaharam-potoana lehibe ary nofinofy tena misy.
Taorian'ny tsenan'ny tsena nahomby indrindra tany Amerika Avaratra, ny minisitry ny fizahantany, Hon. Nandao ny nosy i Edmund Bartlett omaly, niaraka tamina ekipa ambaratonga avo iray hitrandraka ny fahafahan'ny fampiasam-bola ary hampiakatra ny dia fizahan-tany any Jamaika avy any Royaume-Uni (UK) sy Moyen Orient.
Talohan'ny nandaozany azy dia nilaza ny minisitra Bartlett hoe: "Rehefa mikasa ny hanafaingana ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahantany isika dia hitarika delegasiona any amin'ny Emira Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra), Arabia Saodita ary Fanjakana Mitambatra. hijerena ny fahafaha-mampiasa vola vahiny mivantana (FDI) amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary koa ny fahatongavan'ireo tonga avy amin'ny tsenan'ny loharano fahatelo lehibe indrindra. ”
Nambarany fa ny fampiasam-bola dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fanomezana vola ilaina amin'ny fananganana sy fanavaozana ireo tetikasa ilaina amin'ny fampandrosoana sy fitomboan'ny fahaizan'ny fizahantany.
Ny blitz dia manomboka amin'ny tanjona ny tsenan'ny dia ao amin'ny Dubai World Expo 2020 any Emira Arabo Mitambatra. Jamaika dia anisan'ireo fampirantiana maherin'ny 190 ao amin'ny fampirantiana miaraka amin'ny trano heva manasongadina ireo vokatra farany sy fanavaozana farany amin'ny toerana misy ny lohahevitra hoe "Jamaica Makes It Move", mampifandray an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny mozika, sakafo, fanatanjahan-tena tsy manam-paharoa, ary ny lafiny hafa amin'ny lova manankarena.
Mandritra ny UAE, ny Minisitra sy ny ekipany dia hihaona amin'ny Fahefan'ny fizahan-tany ao amin'ny firenena hiresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny famatsiam-bola fizahan-tany avy any amin'ny faritra; Hetsika fizahantany Moyen Orient; ary fidirana amin'ny vavahady mankany Afrika Avaratra sy Azia, ary fanamorana ny fiaramanidina. Ary hisy koa ny fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny DNATA Tours, mpandraharaha fizahan-tany tokana lehibe indrindra any UAE; mpikambana ao amin'ny Diaspora Jamaikana ao UAE; ary Airlines lehibe telo any Moyen Orient - Emirates, Ethiad ary Qatar.
Avy any UAE, ny minisitra Bartlett dia handeha ho any Riyadh, Saudi Arabia, ary hiteny amin'ny 5 izyth Fitsingerenan'ny Initiative Investment Future (FII). Ny FII amin'ity taona ity dia hampiditra resaka lalina momba ny fahafaha-manararaotra fampiasam-bola vaovao manerantany, ny famakafakana ny fironana amin'ny indostria, ary ny tambajotra tsy manam-paharoa eo amin'ireo CEO, mpitarika an'izao tontolo izao ary manam-pahaizana. Hanatevin-daharana azy ny senatera Hon. Aubyn Hill amin'ny asany amin'ny maha minisitry tsy misy portfolio ao amin'ny minisiteran'ny fitomboana ara-toekarena sy ny famoronana asa (MEGJC), miantsoroka ny andraikitra amin'ny Water, Land, Business Process Outsourcing (BPO), ny Fahefana manokana momba ny faritra ara-toekarena ao Jamaika ary tetikasa manokana.
Ny fanafoanana ny torohevitry ny governemanta UK vao haingana manohitra ny dia tsy ilaina rehetra any Jamaika dia nanokatra lalana ho an'ny minisitra Bartlett hitarika ekipa avo lenta mankany London, 30 Oktobra hatramin'ny 6 Novambra, mikendry ny tsenan'i UK. Ny fandraisana anjaran'ny mpandray anjara lehibe dia hatao miaraka amin'ny Virgin Atlantic, China Forum ary British Airways ao amin'ny World Travel Market London (WTM), iray amin'ireo fivoriana fanao isan-taona lehibe indrindra ho an'ny sehatry ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Ary koa, ny minisitry ny fizahantany dia ho vahiny miavaka amin'ny 9th Sakafo fisoloan-tena ao amin'ny Pacific Asia Travel Association. Ho fanohizana ny andraikiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia handray anjara amin'ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany eran-tany, ny fivorian'ny fivorian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny vovonan'ny minisitra WTM koa izy.
Ilay zotram-piaramanidina feno entana dia misy koa ny dinidinika amin'ny haino aman-jery, ny fandraisana anjara miteny ao amin'ny City Nation Place Global Conference any London, ny fivorian'ny birao an'ny Global Tourism Resilience and Crisis Management Center (GTRCMC), ary ny fihaonana amin'ny vondrom-piarahamonina Jamaikana Diaspora any UK.